I-Bike ye-Tune-Up kunye ne-Maintenance Tricks
Midlalo Ukugcinwa & Ukulungiswa
I-Easy Bike Tune-Up Tricks
by UDavid Fiedler
Ngaba ufuna i-bike yakho ihambe ngokukhawuleza? Ride lula? Shift elula ? Ukuphuculwa kwezi ndawo kudla ngokulula ukufezekisa ngamanyathelo ambalwa nje. Zama le mi sebenzi elula engezantsi, engadingi naluphi na ulwazi olukhethekileyo okanye izixhobo, kwaye ubone ukuphucula ngokukhawuleza kwinqwelo yakho.
Hlanza kwaye Ulungelelanise Umtya Wakho
Akunandaba nokuba ungumqhubi okanye u- masher , ikhonkco kunye neeprockets kwibhayisiki yakho idlala inxalenye ebalulekileyo ekudlulisweni kwamandla emilenzeni yakho kumavili akho, okwenza ujikeleze kwaye ujikeleze.
Xa beqokelela ukungcola kunye nokufumana i-gummy, akugcini nje kukunciphisa, kodwa banxiba ngokukhawuleza. Ukugcina ikhenkethi yakho icocekile kwaye ihlanjwe ngenye yezindlela ezilungileyo zokugcina ibhayisikili yakho isebenza kakuhle.
Indlela yokuhlambulula ukhenketho lwakho - ngokukhawuleza nangokulula
Lo akuwona msebenzi wemihla ngemihla okanye ngeveki nayiphi na indlela. Cwangcisa ukwenza oku zonke iikhilomitha eziliwaka okanye kunjalo; ngokuqhelekileyo ukuba uhamba ngeemeko ezinothuli okanye ezingcolileyo. Kuphela kanye ngonyaka xa uhamba ngeekhilomitha ezingama-20 ngeveki nganye.
Icebo: Sebenzisa ioli elula kakhulu eyenzelwe iibhayisikili. Hlala kude nomnxeba njengoko unzima kakhulu kwaye uzakukhawuleza ukutsala ukungcola kunye nokukhwela. Ngaba ufuna uphawu olukhulu lokutshiza olugcobile emlenzeni wakho? Ukusebenzisa ioli kakhulu okanye uhlobo olungalunganga yindlela eqinisekileyo yokufumana enye. Ukucoca ukukhanya kukubalulekileyo, kwaye usule ukugqithisa ekugqibeleni. Kwakhona, i-WD-40 ayikho into enhle, ngoko-ke ungagcini ekusebenziseni loo nto njenge-lubricant.
Lubricate i-Parts of Moving of your Brakes neDerailleurs.
Isithuthuthu sakho sinezinto ezimbalwa ezihambayo zetsimbi ezisengozini yokungcola nokuthungwa.
Ukuze ugcine ibhayisikili yakho ivuya kwaye isebenze kakuhle, ezi ndawo zifanele zifakwe rhoqo.
Amaphuzu epivot kwiibhuleki kunye ne-derailleurs ziyimimiselo emihle yeentlobo zeendawo omele uzijolise kuzo kuba zisengozini ukutsala ukungcola kunye ne-grit ngenxa yokubeka kwibhayisikili yakho. Nantsi umzobo weendawo eziqhelekileyo zokuhamba ngebhayisiki , kodwa unokuzibona ezininzi kwezi ndawo nje ngokubukela ibhayisikili lakho kwisenzo kwaye ubona apho iindawo zensimbi zihambelana kwaye zijikelezane.
Ngokomzekelo, cinga ngamabhuleki akho. Kwiindlela ezininzi zokuhamba ngeebhayisikili, zifakwe kwi-bolt kwisakhelo ngaphezulu kwesondo lakho. Xa udibanisa i-lever, i-brake pivots ezungeze le bolt njengesivumelwano. Zizo ziindawo apho ufuna ukufaka iincontshi zeoli.
Nanku umzobo obonisa indawo eziqhelekileyo apho kufuneka i-lubricant.
Hlola iiPads zakho zee-Brake.
Ukujonga ngokukhawuleza kwimiba yakho yeebrake kuza kubonisa iingxaki ezinokuthi zikulungele ukulungisa. Ufuna ukuhlola:
Ingaba iipredki zakho zeebrake zihambelana ngokufanelekileyo?
Iipaki zee-Brake zizinto ezincinci zerabha ezifakela kwiimvalo zakho ukuze zicotha xa udibanisa iinqwelo zokuhlamba. Qinisekisa ukuba zibetha iiplanga ngokulinganayo, kwaye azinakuchoboza ivili okanye zilahleka umtya wakho ngokuthe ngqo okanye ngokupheleleyo.
Ngaba iiplake zebhere zithengisa?
I-bike bake ipake ifanele ibe "ne-toed-in," oku kuthetha ukuba umgca ophezulu wendlela ufanele uthinte i-bike rim kuqala xa usebenzise i-brakes. Iipasiti zincinci kancinci, kwaye xa udibanisa kanzima, kufuneka ufumane uqhagamshelwano olugcweleyo. Oku kunceda ukukhusela
Khangela i-junk ehlanganiswe kwiipredishiti ze-brake
Hlola ubuso beepakethe ze-brake apho badibana khona, kwaye basebenzisa isicatshuthi esicacileyo njengesiqhe, siphume naluphi na umtya wesanti okanye isinyithi esingaba singene kwi-pad. Ukususa le grit kuvimbela iipasiti ekugqokeni nasekutshitsheni izibonda zakho kwaye kubancedise ukuba banike amandla angakumbi kunye nokuhlala okuqhubekayo.
Hlola uxinzelelo kwiiTire zakho.
Enye yezinto ezilula ukwenzayo kukuhlawulela ukuya kwiinkcaso zomoya emoyeni wakho. Enye into enokuthi ibe nefuthe elikhulu, kwaye ngokumangalisa kukuba abantu baninzi bajonge.
Ukuqwalasela ukugcina izinga elifanelekileyo loxinzelelo lomoya kumatshini akho kwenza izinto ezininzi:
Ukwenza lula ukuhamba
Ukhusela iiplanga zakho kumonakalo
Ukwandisa ubomi beevili zakho
Yenza kube lula ukuba uza kufumana amaflethi .
Ukuhlolisisa ukunyanzeleka komoya kumatshini akho phambi kokuba wonke uhambo lukhawuleza kwaye kulula ukwenza. Nantsi indlela yokujonga ingcinezelo yomoya kwisondo lakho .
Iingxaki ze-Bike Spoke Problems
I-Bike Spokes-Ingxenye ebalulekileyo yamavili akho
Indlela Yokucoca I-Bike yakho yeentaba
Indlela yokuCwangcisa i-Gash yesikhokelo kwiTyhuse ye-Bike
Indlela yokuthabatha i-Tube yangaphakathi yeTysile yeTrans Bike
Uhlolo lweSlime Skabs iTatch Patch
Konke NgeeCowridges ze CO2 kunye ne-Inflators kwiiTyhuthuthu zeeTyhuthuthu
Izinto zokujonga yonke ixesha oya kuyo
I-Slime Tube Ebuqilileyo
Indlela yokutshintsha iTire eTytile
I-Bike Spoke Maintenance
Imizekelo eyahlukeneyo eZimeleyo
Ngaba Ukuba Gay Kuchaphazela Ukuzali?
Iimpawu zamanzi ezinzima
2013 I-Kawasaki Ninja 300 I-ABS I-Review: I-Ninjette Yam Enhle
Iifrentshi zesiFrentshi ngeSans
Ngubani ongumhlolokazi kaBuddy Holly?
Amagama aseSpanish aphula uMthetho woBugcisa
Ukuhlahlela iAspiders Jump?
'Of Studies' nguFrancis Bacon
Umxholo: I-Chac, uThixo weMvula noMbane eMkhosini weMeya
Iimfuneko zeMali zeSBA ezisisiseko
I-Classic ye-Classic O'Jays Ifuna
3 Iimifanekiso ze-Anime ezibalulekileyo ukusuka kuma-1950
Lungisa kwaye Uqhubeke
Yintoni Abantu Abadala Neziqhamama Zamaqabane Ezidlayo?
Ngaba Bahamba Ngomngcipheko Ophezulu WeArthritis?
Isikhokelo seMbali kunye nesimboli se Tae Kwon Do
Yiyiphi imibala eya kuyenzela ukuPenda ngeGolide neSiliva
Uluhlu lweMigangatho yoLuntu kunye neZakhiwo
Reglas para ingreso de mascotas e Estados Unidos: perros, gatos, njl
15 "Iimfazwe zeNkwenkwezi" Iimpawu ze-Yoda Zikunika umbono weJedi Way of Life
Umsebenzi weeNgcini zegazi eliBomvu
Ukwahlukana phakathi koLuntu kunye neHoloji kwi-Evolution
Ukuqonda ukuPhathwa kweeNkcukacha kunye noLwazi
© 2020 xh.eferrit.com